Orbital ịgbado ọkụ Machine, ịgbado ọkụ Work -Station, CNC Ịcha Machine - AEON
Anyị na -enye ngwaahịa ịgbado ọkụ orbital zuru oke, gụnyere eriri ime ụlọ emechiri emechi na isi weld weld, ọkpọ mkpuchi ọkụ na mpempe akwụkwọ welded isi na ụdị ịgbado ọkụ ọkpọkọ mmepụta ihe, yana onye njikwa ịgbado ọkụ nke mmemme.
Anyị na -enye ụlọ ọrụ ịgbado ọkụ akpaka ahaziri ahazi, ọkachasị gụnyere sistemụ ịgbado ọkụ mmanụ mmanụ hydraulic, paseeji flange welding, plasma longitudinal & circumferential seam welding system na sistemu ịgbado ọkụ ogologo.
Ọsọ dị elu, igwe ziri ezi CNC Plasma Cutting Machine, yana kọmpụta modular kọmpat maka nrụnye dị mfe na ngwa ngwa. Tebụl mmịpụta anwụrụ ọkụ na onye nchịkọta na -ahụ maka irube ụkpụrụ nchedo gburugburu ebe obibi.
Anyị na -enye ngwaọrụ niile enwere ike ịdị mkpa maka nkwadebe ịgbado ọkụ, gụnyere ndị na -egbutu ọkpọ, igwe na -akụ ọkpọ, igwe na -agba ọkpọ, igwe tungsten electrode, igwe na -agbagharị eriri igwe, wdg.
Anyị na -enye akụrụngwa dị na sistemụ nkwakọ ngwaahịa AS/RS nwere ọgụgụ isi, gụnyere ụdị crane stacker, ndụdụ telescopic, akụrụngwa ebu, AGV/RGV, mbuli elu na ngwanrọ WMS.
Ọkachamara R&D + Nrụpụta Ogo
Ịmepụta Uru maka Ndị Ahịa
AEONHarvest Group dị na World Finance Center nke Harbor City, Hong Kong. The ụlọ ọrụ na-tumadi raara nye mbubata & mbupụ ọrụ nke ulo oru akpaaka akụrụngwa na awade oru ọzụzụ na mgbe-ire ọrụ. Anyị na -ewere nrụpụta dị mma dị ka ala nke ire ngwaahịa. AEON Harvest International (HK) lekwasịrị anya ugbu a n'inye nkwado pụrụ iche na onye nrụpụta China HUAHENG Group naanị ọrụ ụlọ ọrụ maka nkwalite ngwaahịa na ire ahịa n'ahịa mba ụwa ……
Ịmatakwu gbasara anyị
ETP60 tube na tube mpempe akwụkwọ weld isi
TOA130 isi ụdị weld isi
Nọgide na -emetụ
Hapụ anyị ozi, anyị ga -alaghachikwute gị n'oge adịghị anya na mbọ ọ bụla.